चौरी गोठले करोडपति बने कान्छा गुरुङ — Arthatantra.com
Arthatantra.com > फिचर > चौरी गोठले करोडपति बने कान्छा गुरुङ
नवीन लामिछाने,मनाङ । नेपालका शहर होस् या ग्रामीण भेग सबैतिरका युवा विदेशिने लहर चले पनि मनाङका कान्छा गुरुङ भने चौँरी गोठमा रमाइरहेका छन् ।
आजकाल पढेलेखेका युवा विदेशिएका र जागिरको सिलसिलामा शहर बजारमा भौँतारिएको देख्दा आफूले अँगालेको पुख्र्यौली पेशा नै उचित भएको उनी बताउँछन् । ११ वर्षदेखि चाँैरी गोठमा बस्दै आएका कान्छा गुरुङले शुरुमा जम्मा १० वटा चौरीबाट यो पेशाको थालनी गरेको बताए ।
अहिले ६० वटा चौरी र १५ वटा भाले याक रहेका छन् । उनी चौरीको दूध दुहुने, मोही पार्ने र दूधदहीबाट विभिन्न परिकार, चिज, नौनी, घ्यु र छुर्पी बनाउछन् । अहिले एक केजी नौनीको रु २५ सय पर्छ भने एक पालामा करिव १० केजी नौनी हुन्छ । उनले उत्पादन गरेका यी परिकारहरु मनाङका होटललगायत काठमाडौ पोखरा र बाहिरी मुलुकमा समेत पुग्ने गरेका छन् ।
त्यस्तै, एउटा याकको मूल्य अहिले रु एक लाख २० देखि ३० हजार सम्म पर्छ । कान्छा गुरुङले वर्षमा चार÷पाँचवटा याक बेच्ने गरेको र एक वर्षमा १० देखि १२ लाखसम्म आम्दानी गर्ने गरेको बताए । कान्छा भन्छन्, “अहिले आफूसँग भएका सबै चौरी र याकको मुल्य चार÷पाँच करोड पुग्छ ।”
उनी भन्छन्, “काम भनेको सानो ठूलो हुँदैन, जे गरे पनि हुन्छ । आफूले जति मिहेनत ग¥यो उत्तिनै फल पाइन्छ ।” हिमालको काखमा हिउँसँग चिप्लँदै चौरीको पछि लाग्न कहाँ सजिलो छ र तैपनि रमाउँदै रमाउँदै यिनै चौरीको पछि लागेको छु जसले मलाई सबथोक पु¥याएको छ ।
२०७४ फागुुण १६ गते १२:२२ मा प्रकाशित
एमाले केन्द्रीय लेखा आयोगका अध्यक्ष डा. पुष्प कंडेलको नजरमा 'ओली सरकारका चुनौती'
बेलझुण्डीमा बन्ने भयो रंगशाला
साताभर ३७ अंकले नेप्से ओर्लिँदा ५ अर्ब ६५ करोडको सेयर कारोबार
तोकियो प्रदेश ४ का मुख्यमन्त्रीदेखि वडा सदस्यसम्मको सेवा सुविधा, हेर्नुहोस कस्को कति ?
Home stay : Redefining Tourism against Poverty